बिहेमा बाजा बजाउन शुभ, घरभित्र पस्न किन अशुभ ? | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ १५ गते ०७:५३
हामी पनि समाजकै अभिन्न अंग हौं।
जात छुट्टाउने हाम्रो समाज को लागि मेरो पहिलो प्रश्न ,हामीले पुजा गर्ने भगवान हरु को जात के हो? कामीको सीपले नेपाल जोडियो, दमाईको सीपले पहिचान ,सार्कीको सीपले हरेक पाइलामा काँडा बिझ्न दिएन।
त्यही सार्कीले बनाएको जुत्ता चप्पल लाउँछौ आफ्नो पाउमा चोट नलागोस भनेर, अनि त्यही दमाईले सिलाएको कपडा लगाउँछौ आफ्नो इज्जत छोप्न ! त्यही कामीले बनाएको हतियार चोखो भयो, दु:खको कुरा जसको सीपले नेपाल जितेर आफ्नो पहिचान जोगायो,आज तिनै समुदाय अछुत भैरहेको छ। उनीहरुकै अबमुल्यन भईरहेको छ।
धन्न कामी सङ्ग खुकुरी बनाउने सीप थियो र पुर्खाले शत्रुको नाश गरे। कसैको शक्ति टिक्न सकेन के कामीसङ्ग हतियार बनाउने सीप नभएको भए घोचा र लौरोले नेपाल जोगिन्थ्यो होला? त्यही हतियारबाट उब्जाएको अन्न खाँदा कामीले बनाएको भाँडा कुटो, कोदालो, हँसिया कोदालो याद आउँदैन। त्यही कामीले बनाएको सुन चोखो भयो, हरेक हतियार चोखो बनायो,त्यही कामीले बनाएको अनि त्यो मान्छे कसरी अछुत भयो जसले हाम्रो पेट पाल्यो,हाम्रो इजत ढाक्यो ! यहाँ हरेक जाती हरेक समुदाय हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान भनी गर्व गरेको भेटिन्छ तर उसको संस्कृति र पहिचानमा दमाईको योगदान गर्बले भन्न किन भुल्यो?
सम्पुर्ण जातिलाई समान अबसर समान सहभागिता दिनु पर्छ। भेषभुसाको डिजाइनर र निर्माण त आखिर दमाईले नै होनी गरेको ! दौरा सरुवाल र ढाका टोपी साथै छालाको जुत्ता बनाउने अछुत किन भएका छन् ?दलितको सीप चल्ने दलितको पशिना चल्ने तर दलितको पानी किन नचल्ने ? हाम्रो पाउ धारिला काँडाले नबिझोस् भनेर जुत्ता बनाए आज त्यही मान्छे अछुत कसरी भयो ? जसले हाम्रो हरेक पलको जिन्दगी दियो आज उही अछुत कसरी भयो ? बिहे गर्दा बाजा बजाउँदै अघि जाने दमाई शुभ भयो अनि घरको पिंढीमा आउँदा त्यही अछुत कसरी भयो ?
के दलितको रगत फरक छ कि उनीहरुलाई जिउने अधिकार छैन हाम्रो समाजमा ? यदि छ भने किन इज्जतले जिउन दिदैनौं ? मनको भित्ताबाट दलित हटाएर एउटा असल मान्छेको व्यवहारमा उत्रिनुस,काटे रातै आउँछ रगत फरक छैन। एउटै आमाले जन्माएकी सन्तान हो हामी एउटै आमा ले जन्माएको छोरा छोरी कसरी छुट्याइयो यो जातैमा ? मानिस ठुलो मन ले हुन्छ जात र धर्म धनले होइन आत्मा हो अजम्बरी रहने यो शरीर त नष्ट हुन्छ एकदिन सक्नु हुन्छ सम्मान सबैलाई गर्नुस तर कहिले जातिए कुरा लिएर कसैलाई अपमान नगर्नुस !
दलितका नाममा राजनीति गर्नेहरु माथिल्लो तहमा पुगे, भ्रष्टाचार गरे ,उनीहरुलाई दलित भन्ने नाम पैसा कमाउने बाटो भयो । लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, संविधानमा छुवाछुत गर्न नपाइने भनियो तर मानिस मानिसको बीचमा त्यो भावना आउन सकेन। जातजातको कुरा अन्त्य भयो भनिए पनि यहाँ आज जात जातकै बीचमा लडाइ हुँदै । संविधानको किताबमा होइन,अब वास्तविक समाजबाट यो दलित नाम मेटाउनु पर्छ सबै मानिस एउटै हो मात्र दुई जात हुनु पर्छ। भगवान को त जात छैन भनी हामीमा कसरी आयो जात किन पक्षपात गर्छौं ? मानिस मानिस मा मरे पछि घाटमा नै लाने हो जातमा होइन।
कुन धर्मग्रन्थमा लेखिएको छ र मान्छेको जात हुन्छ भनेर ? हामी नेपाली सबै एक जुट हौं जातीय पर्खाल भत्काएर नयाँ अभियान सुरु गरौँ।